गुप्त किशोरों - Blockchain समाचार
लोकप्रियता cryptocurrencies, यस्तो तराजू पुगेको छ, मात्र धेरै अल्छी वा धेरै सावधान बाइपास यो पार्टी क्षेत्र. यो साहस र लगनशील भई लागिरहेमा मात्र होइन आदानप्रदान मा व्यापार अनुभव वर्ष दसौं संग व्यापारीहरु र लगानीकर्ताले देखाएको छ बाहिर जान्छ, तर पनि साधारण किशोरीहरूको द्वारा.
आधुनिक बच्चाहरु डिजिटल युगमा जन्म थिए, तिनीहरूले बाल्यकाल देखि ग्याजेटहरू सबै प्रकारका कमै मात्र छन्, र तिनीहरूले अघिल्लो पुस्ताका अघि कम्प्युटर सञ्चार सुरु. एक प्रारम्भिक उमेर देखि, तिनीहरूले अघिल्लो पुस्ताका द्वारा को सपना देख्यो थियो कि यस्तो संचार मौका. त्यसैले, पीढी Z प्रतिनिधिको छिटो प्रशिक्षण र आधुनिक प्रविधिहरू को दुनिया मा थप जैविक महसुस.
एरिक Finman, cryptocurrency को क्षेत्र मा सबै भन्दा सफल जवान मान्छे को एक, मा 12 वर्ष Bitcoin को संभावनाहरु महसुस. लागि6वर्ष, उहाँले आफ्नो डिजिटल स्थिति ल्याए 400 अनौठो bitcoins, जो भन्दा बढी छ4हालको दरमा डलर बराबर मा लाख. र यो सबै मा सुरु 2011 संग $ 1000 रात्रिभोज र जन्मदिन प्रस्तुत सुरक्षित. Bitcoin त्यसपछि लायक थियो $ 12.
द्वारा 2013, एरिक को बेच सम्पत्ति Botangle शिक्षकहरूको खोजी गर्नको लागि एक सेवा सुरु गर्न पर्याप्त थिए धेरै Bitcoin हुर्किसकेका थिए, जो त्यो पनि bitcoins लागि पछि बेच. जवान गुप्त-उत्साही त्यहाँ रोक्न छैन जाँदै छ, आफ्नो राय मा, Bitcoin लगानी अपील पनि कायम रहन्छ, र यसको मूल्य एक लाख डलर पुग्न सक्दैन. जवान करोडपति पनि आधुनिक शिक्षा प्रणाली पुरानो हो भनेर विश्वास गर्दछन्, र YouTube र विकिपीडिया धेरै सिकाउन सक्छन्. उहाँले पनि आफ्नो आमाबाबु संग तर्क उहाँले पुगन वयस्कता अघि एक लाख डलर कमाउन सक्छ भने त्यो विश्वविद्यालय जाने छैन भनेर. आधुनिक पुस्तालाई छैन खराब पाठ?
को पाठ्यक्रम, एरिक Finman cryptocurrencies मा keen एक किशोरी को मात्र उदाहरण छैन. आफ्नो मुख्य “प्रतिद्वन्द्वी” छ एडी Zillan, जो पहिले को उमेर मा गुप्त-सक्रिय मान्छे रुचि भए 15. यो एक कोइनबेस खाता सुरु गर्न पनि जवान छ, तर एडी यो छाडेनन् र उहाँले साइट नियम वरिपरि बाटो फेला. पहिलो कुरा उहाँले गर्नुभयो लागि किन्न Ethereum थियो $ 100. यो त त्यहाँ छैन ब्लगर्स र पत्रिका सयौं थिए टिप्पण लायक छ, कुनै एक कसरी राम्ररी कार्य गर्न सिकाउन सक्छ. यस बावजुद, केटा पहिलो कमाएका $ 10 घण्टा एक जोडी को लागि. यो उहाँलाई हान्न असफल सकेन, किनभने 10% केही घण्टामा – उत्कृष्ट वृद्धि. पछि उहाँले बारेमा निवेश $ 12 हजार Crypt मा. एक वर्षको लागि तिनीहरूले गयो $ 350 हजार. अब Zillan छ 18 वर्ष पूरानो, उहाँले लायक भन्दा बढी एक पोर्टफोलियो मालिक $ 1 आफ्नै परामर्श दृढ Cryptocurrency वित्तीय मा लाख र काम.
अर्को “Cryptoteenager” – एन्ड्रयू Cory, 11-वर्ष, को6फारम को छात्र Bitcoin एक पुरा लेख्न व्यवस्थित पुस्तक, जसमा उहाँले cryptocurrency र blockchain को सार को आफ्नो दृष्टि प्रतिबिम्बित. किताब, सायद kryptovlyutam मा कान्छो विशेषज्ञ पनि अमेजन मा खरिद गर्न सकिन्छ. फाइदाको, को पाठ्यक्रम, छोराछोरीलाई मुख्यतया निमित्त, जो, तथापि, यसको सान्दर्भिकता देखि कम छैन. एन्ड्रयू आफूलाई छ, उसको अनुसार, एक भद्र 0.02 bitcoins.
त्यहाँ जवान गुप्त-उत्साही छन् र “खराब मान्छे”. त्यसैले, को Bitcoin प्लैटिनम, धेरै भ्रामक, एक किशोर fraudster द्वारा शुरू भएको थियो. तथापि, सार्वजनिक समय यसको लागि ध्यान, र त्यो परियोजनाको unfairness गर्न स्वीकार थियो. उसको अनुसार, उहाँले मात्र जम्मा गर्न योजना $ 5,000.
स्पष्ट, भविष्यमा डिजिटल अर्थव्यवस्था को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु लागि माग मात्र बढ्नेछ. र प्रस्ताव, सबै खाता द्वारा, छैन पछि LAG जाँदै छ त.
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 11.05.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 14.05.2018